8 meelood oo Kareebiyaanka ah oo ay tahay inaad ogaato | Safarka Absolut
Lugaha Alberto | | La cusboonaysiiyay 12/07/2018 18:06 | Karibiyaanka, Cuba, Mexico
Markii aan ka fikirno meelaha loo safrayo oo leh midab, iftiin iyo qaafiyad, Badda Karibiyaanka iyo jasiiradeeda ayaa sameeya sawirkii ugu horreeyay ee maskaxda ku soo dhaca. Inbadan oo kamid ah 7 kun oo jasiiradood ay ka buuxaan xeebo riyadeed, geedo qumbaha iyo dhaqammo badan oo aan kuwaas ka soo badbaadino 8 meelood oo Kareebiyaanka ah oo ay tahay inaad ogaato ugu yaraan hal mar nolosha. Iyo maya, maahan wax walba inay yihiin xeebo lagu dalxiis tago.
1 Guryaha addoonsiga ee Bonaire
3 Qasriga San Felipe del Morro (Puerto Rico)
4 Grace Bay (Turki iyo Caicos)
5 Barkadda Emerald (Dominica)
7 Tulum (Mexico)
Guryaha addoonsiga ee Bonaire
Sawir qaade: Goboogo
Addoonsiga wuxuu ahaa wax shar ah oo ka talin jiray badda Kariibiyaanka qarniyo badan, in kasta oo maanta marin habaabinta dhaqanku ay tahay caddeynta ugu wanaagsan ee xilliyadaas mugdiga ah, meelo yar ayaa ka dhasha dhawaaqa harqoodka Kaariibiyaanka sida guryaha addoonsiga ee jasiiradda aan xoogaa la aqoon. Bonaire, koonfurta Kariibiyaanka. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'obelisks', guryahan ugu yar waxay u adeegeen hoy ay u noqdaan addoommadii ka shaqeyn jiray guryaha milixda ee jasiiradda, oo ay ku safri jireen illaa toddobo saacadood oo lug ah toddobaad kasta si ay ula midoobaan reerkooda Lagu rinjiyeeyay casaan, cadaan, buluug iyo oranji (midabada calanka Nederland, awoodda ugu weyn ee jasiiradda waqtigaas), astaamaha Bonaire wali waxay ka tarjumayaan qayb ka mid ah xilligaas (naxariis darrada) taariikhda.
Wadooyinka Trinidad. Ber AlbertoLegs
Kuwo badan ayaa oran doona ma jiro wax la mid ah Havana, waana macquul inay run tahay, maaddaama magaalooyin yar ay ka sarreeyaan caasimadda Cuba xagga midabka, dabeecadda iyo dabeecadda, laakiin aniga, sababo badan awgood, waxaan sii wadaayaa inaan la joogo Trinidad. Waana in magaaladan ku taal koonfurta Cuba ay sii ahaato matxaf nool illaa iyo 1850kii warshaddii oo gebi ahaanba istaagtay oo Trinidad ay seexatay. Sanado kadib 75ka midab ee guryahooda dhalaal isla haybad, salsa ayaa buuxisa jidadkeeda iyo dareenka safarto gebi ahaanba waqtiga waxay noqotay hubaal aan lasoo koobi karin.
Qasriga San Felipe del Morro (Puerto Rico)
Waa mid firfircoon oo midab leh, jasiiradda Puerto Rico waxay ku wareegsan tahay qalcaddii laga dhisay qarnigii XNUMXaad ee Boqortooyada Isbaanishka si looga ilaaliyo xukunkeeda burcad-badeedda iyo cadawga. Waxay ku taal caasimadda, San Juan de Puerto Rico, sidoo kale loo yaqaan El Morro waa mid ka mid ah tusaalooyinka qaab dhismeedka gumeysiga ugu sharaf badan Caribbean-ka, gaar ahaan marka dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka ay duulaan qaniinyadooda iyo mowjadaha oo ku dul dhaca goomahooda. El Morro ayaa loo qoondeeyay Dhaxalka Unesco in 1983.
Grace Bay (Turki iyo Caicos)
Waxaa ku magacaabay TripAdvisor sida xeebta ugu fiican Kariibiyaanka, Grace Bay waa Ceeden ka kooban biyo doog ah iyo ciid cad oo ku taal jasiiradda Providenciales, ee Turkiga iyo Caicos, Dalxiis xagaaga loogu talagalay dad caan ah oo fara badan oo ku milma kuwa meeshan yimaada iyagoo raadinaya qeexitaanka ugu wanaagsan ee janno. Intaas waxaa sii dheer, dadka jecel quusitaanka iyo quud-gooynta waxay ka heli doonaan meelo kale oo qurux badan agagaarka sida Chalk Sound, Sapodilla Bay ama Long Bay.
Barkadda Emerald (Dominica)
Kuwo badan waxay dhahaan haddii Christopher Columbus dib loo soo nooleeyo oo uu ku noqdo Caribbean-ka wuxuu aqoonsan doonaa oo keliya jasiiradda Dominica, oo ah janno soo ifbaxaysa oo loogu talagalay inay noqoto tan ugu fiican ee ku-habboon ee ecotourism. Mid ka mid ah sababaha waxay ku jirtaa iyadoo ay jiraan muuqaallo muuqaal ah sida Morne Trois Pitons, Beer dabiici ah oo kuwada nool volcanic dheer, harada caanka ah ee Boiling, ilaa biyo-dhaca sida quruxda badan ee Emerald Pool, sawirka ugu caansan ee jasiiradda ilaa iyo mid ka mid ah meelahaas oo xaqiijinaya safarka iyo kulaylka kulaylka leh ku riyooday in ka badan hal munaasabad. Dhab ahaan, qeybtii koonfureed ee jasiiraddu waa goob dhaxal-dabiici ah oo UNESCO ah.
UNESCO ma aysan ilaawin caasimada mid kale oo ka mid ah jasiiradaha Caribbean si ay u ogaato, Curaçao, janno quus ah iyo soo jiidasho gumeysi iyada oo ay ugu wacan tahay qaab dhismeedka koronto ee magaaladan dekedda ah. Saamaynta Nederlandka, Boortaqiiska iyo Isbaanishka Waxaa lagu xayiray inta u dhexeysa guryaha iyo fagaarayaasha xudunta u ah jasiiradda taas oo ay weheliyaan Aruba iyo Bonaire-ka aan soo sheegnay. Jasiiradaha ABC ee Kariibiyaanka. Mid ka mid ah geesaha badan ee Kariibiyaanka si loo ogaado wixii ka baxsan waajibaadka caadiga ah.
Maxaa ka dhigaya Tulum inuu ka duwan yahay xeebaha kale ee Caribbean-ka isku dhafan ee taariikhda iyo biyaha turquoise. Waxay ku taal gobolka Quintana Roo, xeebaha Tulum waxaa ku dhex milma qaar ka mid ah burburka Mayan (si loo muujiyo midka loo yaqaan Macbadka Dabaysha, astaanta aagga) iyo meelaha barakaysan ee loogu tala galay ilaahadda Ixchel, isla ilaahadda bacriminta iyo aafooyinka dabiiciga ah ee sameeya astaamaha ugu yar ee qarsoon. Dabcan, Tulum sidoo kale waa bedel ku habboon meelahaas kale ee dalxiisyada iyo xeebaha ciriiriga ah ee caadiga ka ah gobolka Yucatan.
Muddo tobanaan sano ah khubaro badan ayaa isku dayay inay ogaadaan sirta ku hoos jirta wareegga buluugga buluugga ah ee lagu xardhay badda Kariibiyaanka, in kasta oo ay dhammaantood isku wada raacsan yihiin inay ahayd natiijada daadadka sameysmayaasha kala duwan ee dhagaxa ka dib da'da barafka, kuwa kale waxay tilmaamayaan in khasnadaha laga dhex helay muujiyaan wixii la soo dhaafay iyo asalkii la waayey ilbaxnimooyinkii kala duwanaa ee Bartamaha Ameerika. Lagu daboolay sixir iyo qarsoodi, Buluugga Bulle ee Belize waa sameysmo 123 mitir qoto dheer halkaas oo nolosha badaha ay kuwada nooshahay qorrax la'aan aan jirin oo heerkeeda ugu qoto dheer leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » 8 meelood oo Kareebiyaanka ah oo ay tahay inaad ogaato
Xeebta ugu wanaagsan ee Cabo de Gata